Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseCambodia » Ungandwendwela njani iCambodia kwakhona?
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba zaseCambodia • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Ihlabathi livula kancinane iindawo zokhenketho kuzo zonke iindawo zehlabathi. Ukuvulwa kwakhona kujoliswe kwiindwendwe ezigonywe ngokupheleleyo. ICambodia lilizwe lamva nje elenza isibhengezo esinjalo ngeCawa.
Umphathiswa wezempilo waseKhambodiya nge-14 kaNovemba ka-2021, usandula ukukhupha ingxelo esemthethweni eqinisekisa ukuba akukho mfuneko yokuvalelwa bodwa kubahambi abagonywe ngokupheleleyo.
Kwisiteyitimenti, uMphathiswa wezeMpilo wongeze ukuba nangona kungekho mfuneko yokugonywa, kukho isibophelelo sokuthatha iisampulu kubahambi abangenayo usebenzisa izixhobo zovavanyo olukhawulezayo.
Isiteyitimenti siphinde sacacisa ukuba, kwabo bangagonywanga, iintsuku ezili-14 zokuvalelwa kunye nesampula ye-PCR ziyafuneka, kungekho mfuneko zikhethekileyo kwabo sele begonyiwe.
Umphathiswa wezempilo ukhuphe isibhengezo seendaba emva kwesigqibo sika-PM u-Hun Sen ngomyalezo welizwi ukuphelisa iimfuno zokuvalelwa kwabantu eCambodia, abahambi abagonywe ngokupheleleyo.
UMphathiswa wezeMpilo wongeze ukuba abakhweli abaye bagonywa ngokupheleleyo kwaye ngoku bavalelwe kumaziko okuvalelwa, iihotele, kunye namakhaya kwilizwe liphela kwaye abangenayo i-COVID-19 baya kuvunyelwa ukuba baphume bodwa ukusuka nge-15 kaNovemba ka-2021 ukuya phambili. .
Uguqulo olungekho semthethweni lweemfuno ezintsha lungezantsi:
Imvume yabakhweli abaye bagonyelwa ngokupheleleyo i-COVID-19 ukuba bangene eCambodia ngaphandle kwesidingo sokuvalelwa bodwa
1. Abakhweli abagonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-19 kwaye beza eKhambodiya ngomoya, ngolwandle, nangomhlaba kufuneka beze:
– Isatifikethi soGonyo, esiqinisekisa ugonyo lwe-COVID-19, idosi esisiseko esipheleleyo kunye nesiqinisekiso.
- Uvavanyo lwe-COVID-19 (PCR) olusemthethweni kwiiyure ezingama-72 ezifunyenwe ngaphambi kokufika eCambodia, zamkelwa ngugunyaziwe wezempilo welizwe elichaphazelekayo.
Ekufikeni kwabo eKhambodiya, abakhweli kufuneka bathathe uvavanyo olukhawulezileyo (Uvavanyo oluKhawulezayo) i-COVID-19 ekungeneni kwelizwe kwaye balinde iziphumo zovavanyo kangangemizuzu eli-15 ukuya kwengama-20.
Emva kokufumana iziphumo zovavanyo ezibonisa ukuba une-COVID-19, umntu uyakwazi ukuhamba ngokukhululekileyo kulo lonke elaseKhambodiya, nokuba akuwuphi na ummandla okanye iphondo, kwaye akufuneki ukuba avalelwe yedwa.
2. Kubakhweli abangagonyelwanga i-COVID-19 nabahambayo ukuya eKhambodiya, kufuneka baluphumelele uvavanyo lwe-COVID-19 ngomatshini wePCR kwaye balandele inkqubo yokuvalelwa bodwa iintsuku ezili-14 ngokungqinelana neenkqubo ezisebenzayo.
3. Abakhweli abagonyelwe ngokupheleleyo i-COVID-19 kwaye ngoku bagonywa kuwo onke amaziko okugonya, iihotele kunye namakhaya kwilizwe liphela kwaye abangenayo i-COVID-19 baya kuvunyelwa ukuba baphume bodwa ukususela ngoNovemba 15. 2021 ukubheka phambili.
Ulwazi oluninzi ngoKhenketho eCambodia.